Microfinance နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး – ခင်မမမျိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Money & Finance » Microfinance နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး – ခင်မမမျိုး
Microfinance နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး – ခင်မမမျိုး
Posted by kai on Aug 22, 2011 in Money & Finance, Think Tank |7comments
Micro ဆိုတာကို “သေးငယ်သော” လို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလေ့ရှိကြပြီး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးရှူထောင့်ကနေ ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါ သေးငယ်သော စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ တနိုင်တပိုင်လုပ်ကိုင်သော ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးသမားများ၊ ၀င်ငွေနည်းပါးသော လူထုလူတန်းစားများ စတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပါတယ်။ Finance (ဘဏ္ဍာရေး) ဆိုရာမှာလဲ စီးပွားရေးချေးငွေများ၊ ပညာရေးချေးငွေများ၊ စုဆောင်းငွေများနဲ့ အသေးစာအာမခံ လုပ်ငန်းများ စတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပါတယ်။
အစိုးရကတော့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချေ၇းဆိုပြီး ကျောင်းဆရာမတွေကို မယူမနေရ ပိုက်ဆံငါးသောင်းစီ ချေးပြီး လစဉ်ပြန်ဖြတ်ပါတယ်တဲ့။ ဒေါ်ခင်မမမျိုးပြောတဲ့ Microfinance နဲ့သဘောတရားချင်းတူပေမဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဘာလဲဆိုတာခန့်မှန်းလို့မရတာကြောင့် နည်းနည်းရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ အစီစဉ်တွေ ဖေါ်ထုတ်ပေးကြတဲ့ ပညာရှင်တွေကို လေးစားပါတယ်။
မကောင်းတွေးပြီး ကန့်လန့် မတိုက်ကြဘဲ ဝိုင်းကူကြဘို့လိုပါတယ်။
“ဒီလို အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ အားနည်းချက်တွေလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတိုင်းဟာ ဒင်္ဂါးပြားတစေ့ရဲ့ ခေါင်းနဲ့ ပန်းလိုပါပဲ။ အားနည်းချက်တွေ ရှိသလို အားသာချက်တွေလဲ ဒွန်တွဲ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ”
ရိုးသားပြီးဆင်းရဲတဲ့ လူတွေကြားမှာ လူလည်တွေ အခွင့်ရေးသမားတွေ ကြောင့်တခါတခါ ကောင်း
မွန်တဲ့ အစီအစဉ်တွေ ပျက်ပျက်သွားတတ်တော့ အဲဒါလေးတွေလဲ ထဲ့စဉ်းစားကြပါ ခင်ဗျား။
သိပ်ကောင်းတဲ့စာတွေကို သာ အမြဲ တင်ပေးနေလို့ကျေးဇူးလည်းတင်… လေးလည်းလေးစား၇ပါတယ် ……kai ရေ…။
ဆင်းရဲ မှုကို တိုက်ဖျက်မယ်လို့ဆိုတဲ့အစိုးရသစ်ရဲ့စကား ကို မျှော်လင့်ချက် အပြည့်နဲ့ စောင့်နေပါတယ် ။
မူ ကတော့ ကောင်းပါတယ်၊ ပြောစရာ ငြင်းစရာ တစ်ကွက်မှ မရှိပါ၊
မူကို အကောင်အထည်ဖေါ်တော့မဲ့ လူ ကသာ အရေးကြီးတာနေမှာ၊
မလွတ်တန်းဖတ်ရတယ် တခါ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ.သမိုင်းမတင်ထားတဲ.အကြောင်း
အခုသဂျီး တင်တဲ.ပို.စ်ကလဲအသေးစိတ် လေ.လာကြည်.ရမယ်.
အခုတလော တော်တော်ခောတ်စားနေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲ …
လုပ်ငန်းရှင်တွေကို အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး ငွေထည့်ခိုင်းတယ် … တစ်ဦးကို ၅ သိန်းနဲ့ လုပ်ငန်းရှင် ၁၀၀ လောက်က သိန်း ၅၀၀ မတည်နိုင်တယ်ဆိုရင် အစိုးရကလည်း နောက်ထပ် (ဘယ်နှစ်ဆလဲတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး) ထပ်ပြီး မတည်ပေးပါတယ် … အဲဒီနောက် အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကို ငွေချေးပေးနေကြပါတယ် … ဒါပေမယ့် တစ်ဦးကို ငွေ သုံးသောင်းလောက်ပဲ ချေးနိုင်တာတွေ့ရတယ် …. ၂ ကျပ်တိုးပေးရပါတယ် …. ဆင်းရဲသားတွေကတော့ လူတိုင်းချေးငွေသွားထုတ်ကြတယ် …
တစ်ချို့ရပ်ကွက်တွေမှာတော့ ၅ ယောက်တစ်ဖွဲ့ချေးပေးပြီး အပြန်အလှန် အာမခံလက်မှတ်ထိုးပေးရတယ်လို့ကြားတာပဲ …
ချေးငွေက ရင်းနှီးစားသောက်လောက်အောင် လုံလောက်တဲ့ပမာဏမဟုတ်တော့ အသုံးစရိတ်ထဲပါသွားပြီး ပြန်ဆပ်ဖို့ဒုက္ခရောက်ကြအုန်းမယ် ထင်ပါတယ် ..
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားနေရတာတော့ ဝိုင်းကြီးချုပ် နောက်ကျောချင်းခိုင်း စနစ်ဆိုပြီး လူ၅ယောက်လောက် တစ်ဖွဲ့ကို ရပ်ကွက်လူကြီက အာမခံရင် စာရင်းတင်ပြီး ချေးလို့ရတယ်လို့ ပြောသံကြားတယ်။ ဘာအာမခံမှ ပေးစရာမရှိ၊ ပေးစရာမလိုပေမယ့် အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သူ ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးပြီးမှ ထုတ်ပေးဖို့ လိုတယ် ထင်တာပဲ။ ဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ လွယ်လွယ်ရ၊ လွယ်လွယ်သုံးနဲ့ ဆင်းရဲတွင်းပိုနက်မှာတောင် ကြောက်ရတယ်။